Realme GT Neo2, safidy mahery vaika amin'ny antonony | Gadget News
Miguel Hernandez | 16/11/2021 13:00 | Finday, telephony
Mitondra anao indray ny vokatra avy amin'ny marika mahatoky amin'ny sandan'ny vola izay tonga vao haingana tany Espaina mba hijoroana amin'ny mpanjakavavin'ny mora, Xiaomi. Miresaka izahay satria tsy mety amin'ny hafa ny momba ny Relame, orinasa izay mitazona katalaogin'ny famoahana izay feno vaovao na dia eo aza ny krizy amin'ny semiconductor sy vokatra hafa ankehitriny.
Manolotra ny Realme GT Neo2 vaovao izahay, ny fandefasana farany an'ny orinasa izay nodinihinay lalina sy nosedraina mba hahitanao raha tena hanamarika mialoha sy aorian'ny antonony.
1 Famolavolana sy fitaovana: Ny iray amin'ny sokay ary ny iray amin'ny fasika
3 Multimedia sy fifandraisana
4 Fizarana sary, ny fahadisoam-panantenana lehibe
Famolavolana sy fitaovana: Ny iray amin'ny sokay ary ny iray amin'ny fasika
Amin'io lafiny io, andao lazaina fa mitohy amin'ny làlany efa napetraka i Realme, Ny GT Neo2 dia miloka amin'ny lamosina mitovy amin'ny teo aloha na dia manome fahatsapana ho vita amin'ny fitaratra aza izy io, izay tsy mitondra amin'ny fiampangana tsy misy tariby, indrindra fa ny sisin'ny fitaovana dia vita amin'ny plastika toy ny mahazatra ny marika hatramin'izao. Ao amin'ny faritra anoloana dia manana ny tontonana 6,6-inch vaovao miaraka amin'ny sisiny somary tery, saingy lavitra ny atolotry ny vokatra hafa, indrindra raha raisina ny asymmetrika eo amin'ny ambony sy ambany.
Loko: Manga mamirapiratra, maitso GT ary mainty.
Amin'izao fotoana izao, ny sisiny mandrobo kokoa, ny USB-C dia nafindra ho any amin'ny farany ambany, tsy misy Jack 3,5mm amin'ity fotoana ity, raha manana ny bokotra "power" eo amin'ny ilany havanana isika ary ny bokotra volume eo ankavia. Izany rehetra izany dia manolotra antsika ny refy 162,9 x 75,8 x 8,6 mm ary ny totalin'ny lanjan'ny 200 grama, Tsy maivana izany raha heverina fa vita amin'ny plastika, heverintsika fa ny haben'ny bateria dia hisy ifandraisany amin'izany. Raha tsy izany, fitaovana vita tsara miaraka amin'ny palette loko mahaliana.
Manomboka amin'ny teboka tian'i Realme isika, ny zava-misy amin'ny filokana amin'ny Qualcomm Snapdragon 870 Manome famantarana tsara izany fa tsy mila mitsitsy fahefana ianao, mba hifehezana azy dia manana rafitra fanaparitahana hafanana avy amin'ny Realme izahay izay efa nasehon'ny dikan-teny maro ny tombony. Amin'ny ambaratonga grafika dia miaraka amin'ny Adreno 650 amin'ny fahaiza-manao ekena, toy izany koa 8 na 12 GB an'ny LPDDR5 RAM miankina amin'ny fitaovana izay nanapa-kevitra ny hividy. Ny santionany fitsapana ho an'ity famerenana ity dia 8 GB an'ny RAM.
Batterie izay nanome anay mihoatra ny andro iray manontolo ny fampiasana.
Manana safidy fitahirizana roa izahay, 128 GB sy 256 GB tsirairay avy miaraka amin'ny teknolojia UFS 3.1 izay ny fampisehoana dia mihoatra noho ny voaporofo ho safidy fitahirizana tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android. Hatreto dia mety tsara ny zava-drehetra araka ny hitanao, manana fahatsiarovana tsara isika, fitaovana matanjaka ary fampanantenana maro, ho hitantsika hoe iza amin'izy ireo no tanteraka ary iza no tsy. Ny marina dia ny fitaovana dia mihetsika mora foana miaraka amin'izay rehetra apetrakay eo anoloany, mametraka soso-kevitra manokana, Realme UI 2.0 izay manohy misintona andiana bloatware izay tsy dia takatsika loatra amin'ny fitaovana misy ireo toetra ireo, na izany aza, afaka manala izany amin'ny fomba mora isika.
Multimedia sy fifandraisana
Ny efijery AMOLED 6,6 santimetatra dia misongadina, manana vahaolana FullHD + izahay miaraka amin'ny tahan'ny famelombelomana tsy latsaky ny 120 Hz (600 Hz raha misy famelombelomana mikasika). Ity dia manolotra antsika amin'ny endrika 20: 9 famirapiratana tsara (hatramin'ny 1.300 nits amin'ny tampon'ny farany) ary fanitsiana loko tsara. Tsy isalasalana fa ny efijery dia toa ahy no nisongadina tamin'ity Realme GT Neo2 ity. Mazava ho azy fa manana fifanarahana amin'ny HDR10 +, Dolby Vision ary farany Dolby Atmos amin'ny alàlan'ny mpandahateny "stereo" izahay, mametraka marika fanononana izahay satria ny ambany dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa noho ny eo aloha.
Momba ny fifandraisana, na dia manao veloma ny Jack 3,5 mm aza izahay, Famantarana ny marika (angamba ny antony nampidiran'izy ireo ny Buds Air 2 sasany ao anaty fonosan-gazety). Mazava ho azy fa manana fifandraisana izahay Dual SIM ho an'ny angona finday, izay mahatratra haavon'ny hafainganam-pandeha 5G araka ny efa nampoizina, niaraka tamin’ny Bluetooth 5.2 ary ny tena zava-dehibe dia mankafy koa isika WiFi 6 izay tamin'ny fitsapana nataoko dia nanolotra hafainganam-pandeha avo lenta, fampisehoana lehibe ary fitoniana. Farany miaraka GPS sy NFC ahoana no mety raha tsy izany.
Fizarana sary, ny fahadisoam-panantenana lehibe
Ny fakan-tsary Realme dia mbola lavitry ny fifaninanana, toy ny mametraka sensor maka tahaka ny lehibe (miaraka amin'ny frame mainty tena voatonona), lavitra ny fahaiza-manao natolotry ny rindrambaiko amin'ny ankapobeny. Amin'io fotoana io dia tsaroanao fa miatrika fitaovana midadasika ianao. Manana sensor lehibe izahay izay miaro tsara amin'ny toe-javatra mazava tsara, mijaly amin'ny fifanoherana, fa mampitony tsara ny horonan-tsary. Ny Wide Angle dia manana fahasahiranana miharihary amin'ny hazavana ambany ary miaraka amin'ny fifanoherana amin'ny jiro, ny Macro dia add-on izay tsy manome na inona na inona amin'ny traikefa.
Main: 64 MP f / 1.8
Zoro malalaka: 8MP f / 2.3 119º FOV
Manana fakan-tsary Selfie 16 MP izahay (f / 2.5) izay manana fomba hatsaran-tarehy manelingelina fa, tsy toy ny aoriana, dia manome vokatra tsara ao anatin'ny zavatra andrasana. Ny maodely portrait, na inona na inona nampiasain'ny fakan-tsary, dia manana logiciel manitikitika be loatra ary mahavita maka hazavana kely kokoa noho ny nantenaina, ka tsy soso-kevitra ny hampiasa azy. Mahavariana fa ny tena mahavariana dia ny horonan-tsary misy rafitra Artificial Intelligence ho an'ny fanamafisana, zavatra hitako fa manana kalitao avo indrindra.
Raha mbola tsy ilaina ho anao ny fizarana sary (amin'ity tranga ity dia manasa anao ho any amin'ny farany ambony aho) ity Realme GT Neo2 ity dia manolotra fampisehoana tsara noho ny tontonana AMOLED miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, ny fahatsiarovana UFS 3.1 ary ny processeur fantatra. , ny Snapdragon 870. Ao amin'ny fizarana ambiny dia tsy misongadina izy io, ary tsy mihatsaravelatsihy, satria zavatra iray izy io dia terminal izay manomboka amin'ireto vidiny manaraka ireto:
TOLOTRA ZOMA MAINTY (manomboka 16 Novambra ka hatramin'ny 29 Novambra 2021): € 369,99 (8GB + 128GB) € 449,99 (12GB + 256GB).
Hita ao amin'ny fivarotana an-tserasera realme ary koa amin'ny mpaninjara ofisialy toa an'i Amazon, Aliexpress na PcComponentes ankoatra ny hafa.
Navoaka tamin'ny: Novambra 16 avy amin'ny 2021
Hery lehibe sy fitadidiana tsara
Vidiny nasiam-panitsiana atolotra
Ecran tsara amin'ny fikandrana sy havaozina
Frames tena voatonona
Manohy miloka amin'ny plastika izy ireo
Tsy mazava ny feo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Realme GT Neo2, safidy mahery vaika amin'ny antonony
Samsung QLED 4K 2021 TV misy fihenam-bidy 32% (mitahiry € 276 ianao)